Itoobiya oo shidaalka gobolka Ogaden ka dhoofinaysa Dekadda Jabuuti
JABUUTI - Dowladda Itoobiya ayaa Jabuuti la saxiixatay heshiis ay Dekad ku taalla dalkeeda uga dhoofin doonta Shidaalka laga soo saarayo gobolka Ogaden, kadib markii Jabhadda ONLF ay ogolaatey inay hubka dhigto.
Wasiirka Tamarta Jabuuti, Yoonis Cali Geedi ayaa sheegay in heshiisk cusub uu yahy mid dhuun-qaada shidaalka Itoobiya, taasoo geyneysa Dekadaha dalkiisa, oo ku yaalla Badda Cas.
Heshiiskii Jabuuti iyo Itoobiya wuxuu yimid sanad ka dib markii Shirkadda POLY-GCL ay la saxiixatey heshiis is-afgarad ah dowladda Jabuuti si loogu dhiso dhuun shidaalka qada, iyadoo mashruucan uu ku kacayo $ 4 bilyan.
Waxay sidoo kale Shirkaddan ka hirgelinaysa Dekad ku taalla magaaladda Damerjog, oo ku dhaw xuduuda Somalia, halkaasi oo laga dhoofinayo shidaalka ka yimaada dalka Itoobiya, gaar ahaan bariga gobolka Ogaden.
Gaaska dabiiciga ah ee gobolka Ogaden ayaa dhoofintiisa la billaabayaa sanadka soo socda ee 2020-ka.
"Waa mashruucii ugu ballaarnaa oo abid laga hirgeliyo dalka Jabuuti, labada dhinac [Jabuuti iyo Itoobiya] waxay gaareen heshiis mabda 'ah si ay u oggolaadaan in ay ka faa'iideystaan mashruuca qaab haboon," ayuu yiri Wasiirka Tamarta Jabuuti, Yoonis Cali Geedi.
Itoobiya ayaa keyd shidaal oo ballaaran ka heshay bariga gobolka Ogaden 1970-yadii, iyadoo heshiis lagu saaraayo la gashy Shirkad laga leeyahay China oo lagu mgacaabo POLY-GCL Petroleum Investments.
Shirkaddan ayaa maalgashi ku sameynaysa labo ceel oo shidaalka laga helay, oo lagu kala mgacabo Calub iyo Hilala, waxaana ay heshiis saami-qeybsi la gashay dowladda Itoobiya sanadkii 2013-kii.
Itoobiya oo ah dal aan Bad lahayn ayaa ku tiirsan Dekadaha dalalka ay deriska yihiin, gaar ahaan Jabuuti oo mudo dheer isticmaalayeen, iyadoo hadda laga yaabo inay u wareegtaan dhinaca Eritrea, oo sanadkii tagey ka heshiiyeen colaadii 20-ka sano u dhxeysay.